Sore emphinjeni spray - China Shenzhen Feellife Medical
Ephathekayo Mesh Nebulizer
Sore emphinjeni spray
Ukuze umphimbo obuhlungu
Ubuningi min oda: 100 Piece / Pieces
● ukwelashwa Non-imithi.
● Akekho ukuluthwa opium izidakamizwa.
● Ukunakekelwa abasekelayo nempumuzo izimpawu ezifana umphimbo obuhlungu, ukuvuvukala, omile futhi hoshozela.
Mayelana The Product:
It is ikakhulukazi ezivezwa inqubo ethuthukile ukukhiqizwa sodium chloride, emhlophe okhunini oluqinile, neseleko, umoya-mpilo yezokwelapha futhi manzi ahlanzekile okuyinto kokuhambisana nendlela esezingeni pharmacopoeia.
Sicela ususe gasket zokuvikeleka ezivela sprayer okokuqala. Shake it ngaphambi kokusebenzisa. Abantu abadala kanye nezingane ukusetshenziswa engaphezu kwengu-12 ubudala kabili ngosuku, fafaza izikhathi 3 noma 4 ku ingaphakathi ikhala isikhathi ngasinye. Izingane eminyakeni engaphansi kwengu-12 ubudala, sebenzisa kabili ngosuku, bese fafaza izikhathi 2 noma 3 ingaphakathi ikhala.
Previous: Hay fever / Allergy acinene spray
Olandelayo: Air Pro III
Ukunikezwa kwamandla kagesi DC4.8V lithium titanate ibhethri noma Micro USB 5.0V
Ukusetshenziswa kwamandla <2.5W
Life ibhethri Umthamo asele igcina ezingaphezu kuka-80% umthamo kokuqala ngemva 3000 nowe ukusetshenziswa.
Nebulilzation Ukukala 0.3ml / imiz ~ 0.7ml / iminithi
Imithi Cup Umthamo 10ml max
Ukusebenza Frequency 110kHz 士 10kHz
amandla Okubonisa Esanele: ukukhanya ekhombisa igcina lightingInsufficient: ukukhanya ekhombisa igcina flashing
Auto-off Okuzenzakalelayo livaleke-Valiwe ngemva kwemizuzu engu-10 yokusetshenziswa
Ukusebenza Imvelo Izinga lokushisa: imiz 5 ℃ ~ max 40 ℃ Air umswakama: max 80% RH
Storage Izinga lokushisa: imiz -20 ℃ ~ max 55 ℃ Air umswakama: max 93% RH
isisindo Kudivayisi 100g (kuhlanganise amabhethri)
Ubukhulu Kudivayisi 37.6 (W) mm * 37.6 (l) * 97.7 (H) mm
Isesekeli Life Imithi inkomishi: 1yearMask: 1yearNote: Shall kuthathelwe indawo ngenxa yokusebenzisana imvamisa nsuku zonke.
nebulizer, anezikhala nebulizer, nebulizer ephathekayo, nebulizer compressor, nebulizer ultrasonic, ikhaya nebulizer, nebuliser, impatho nebulizer, isifuba somoya nebulizer, albuterol nebulizer, nebulizing diffuser, compressor n
Namankanka YOKUNIKEZA USIZO
IZINGANE ZIFUNA OBANDAYO / WEZINYONI acinene spray
Hay fever / Allergy acinene spray (CBD)
Hay fever / Allergy acinene spray
Sore emphinjeni spray (CBD)
Namankanka YOKUNIKEZA USIZO (CBD)